(Warbixin) Puntland oo sii xoojinaya tayaynta imtixaanka dugsiyada. | puntlandi.com
(Warbixin) Puntland oo sii xoojinaya tayaynta imtixaanka dugsiyada.
Waxaa magaalada Boosaaso si habsami leh uga socda maalintii labaad tababar ay qaadaanayaan 44 macallin oo ka kala socda dugsiyada degmada Boosaaso iyo Ufayn ee gobolka Bari. Tababarkaan oo uu fulinayo Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare Puntland ayaa waxaa maalgelinaya dugsiyada ka qayb qaadanaya.
Agaasimaha Waaxda imtixaamadka Axmed Maxamud Warsame (Axmed Saahid) ayaa sheegay Qorshahan loogu talagalay in lagu tayeeyo, sarena loogu qaado hannaanka imtixaanaadka dugsiyda si loo helo waxbarasho tayaysan. Aragtida uu xafiiska imtixaanaadku ku shaqaynayo ayaa waxay tahay “imtixaan tayaysan ayaa soo saaro waxbarasho tayaysan”.